Tsy Ilaina Intsony ve ny Miasa Mafy?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuuk Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kamba Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Palau Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Ponape Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Betsaka no Tsy Tia Miasa Mafy
Miasa amin’ny orinasa mpitatitra entana i Alex. Misento izy sady mibata baoritra mankao anaty kamiao. Lasa saina izy hoe: ‘Fa maninona àry aho no tsy maintsy manao an’ity asa tsy mitondra mankaiza ity? Rahoviana ihany aho vao mba hanan-karena? Sambatra be mihitsy aho izao raha tsy mila miasa!’
Tsy tia miasa mafy i Alex ary maro no mitovy aminy. Hoy ny lehilahy iray mpanamboatra fiara, atao hoe Aaron: “Be dia be no mieritreritra fa manambany azy ny manao asa vatana. Izao no ao an-tsainy: ‘Ataoko aloha ity mandra-pahitako asa tsaratsara.’ ”
Nahoana no maro no tsy tia miasa mafy? Ny zavatra hitany sy reny ao amin’ny radio sy tele ary gazety angamba no mahatonga an’izany. Aseho ao matetika hoe ny olona miadana be sy manankarena no manana fiainana “tonga lafatra.” Hoy i Matthew, mpikojakoja trano: “Misy mihevitra hoe ny olona tsy tafita amin’ny fiainana no miasa mafy.” Hoy koa i Shane, mpanadio trano: “Tsy mety miasa be intsony izao ny olona na dia ampy aza ny karama omena azy.”
Maro amin’ny olona tafita anefa no tia miasa mafy. Mpanao trano, ohatra, i Daniel ary 25 taona. Hoy izy: “Tena mahafa-po ny miasa mafy, indrindra rehefa antony tsara no anaovana azy.” Hoy koa i Andre, 23 taona: “Mahasambatra sy mahafaly ny miasa mafy. Rehefa tsy dia miasa na tsy dia manao zavatra ianao, dia tsy hoe ho faly be foana fa ho leo be.”
Nahoana no misy olona tia miasa mafy toy izany? Satria mampihatra ny toro lalana ao amin’ny Baiboly izy ireo. Mampirisika antsika hazoto hiasa sy hanana fikirizana ny Baiboly. Tsy vitan’izay fa voalaza ao hoe inona no azontsika atao mba hahatonga antsika hankafy ny asantsika.
Inona ny toro lalan’ny Baiboly hanampy anao ho faly amin’ny asanao? Vakio ny lahatsoratra manaraka dia ho hitanao ny sasany amin’izany.
Hizara Hizara Betsaka no Tsy Tia Miasa Mafy